PressReader - Ilanga: 2019-01-10 - Masithathe izinqumo esingeke sizisole ngazo
Masithathe izinqumo esingeke sizisole ngazo
Ilanga - 2019-01-10 - Izindaba -
MA-AFRIKA, ake sibonge oMdala wezinsuku namanxusa emindeni yethu, ithongo phela ngokusigcina enyakeni osanda kwedlula nokusingenisa ku-2019 siphephile futhi siphilile.
Ngifisa ukuthi njengoba siwuqala lo nyaka, sike sizibophezele ekubeni sizithande futhi sizinakekele ngakho konke okusemandleni ethu. Masingabeki impilo yethu engcupheni ngamabomu futhi sizifundise nokuthatha izinqumo ezicubunguliwe ukuze singazisoli ngazo.
Ngaphezu kwakho konke, ngifisa singakhohlwa yimvelaphi yethu nobuthina njengabantu base-Afrika, abanamasiko nesintu. Singalibali ukubonga abantwana esibaphiwe ngabadala nemisebenzi esinikwe yona konke namathalente neziphiwo ngoba esiyikho nesinakho, sikuphiwa ngabadala besinxusela nakuSimakade.
Uma sesikutholile ebesikucela kuSimakade, kasibongi kanti ngesikhathi kusenmyama, sisaswele, senza zonke izethembiso zokuthi siyothi singathola sibakhumbule nabo ngokubonga kodwa.
Singakhohlwa ukuthi nabo abangasekho bafana nathi njengoba sinengwa uma umuntu noma ingane ingabongi uma kukhona oyenzele khona noma ithatha nge- sandla esisodwa - okuwuphawu lokungabi nandaba nesipho.
Nakubona abadala kuba kanjalo bagcine sebengasakuphi lutho, kube sengathi kunobuthakathi kanti umuntu uzithakathe yena ngokwehluleka wukukhuthaza abamgadile nabamengamele empilweni ngokuba nje abonge.
Abelaphi bendabuko abaningi nginesiqiniseko sokuthi bangangifakazela ukuthi abantu abaningi abafika bexakekile bejikelwe yimpilo, kusuke esikhathini esiningi kukhaleleka udaba lokubonga nje hhayi okuningi.
Sengathi ezinqumeni eziningi esizozithatha kulo nyaka nasezinhlelweni zezinto esizozenza, singakukhohlwa ukubonga ithongo nedlozi ukuze sinciphise ukuhlaselwa yizinkinga ezingagwemeka kalula. Abantu abaningi balinda ukuba kuze kube nenkinga ngaphambi kokuba bayohlola kwababonayo.
Kuyaxaka lokhu kunganaki ngoba kodokotela besilungu kuyayiwa nje umuntu engaguli, eyobheka nje ukuthi usaphile kahle yini kube khona nokuhlolwa okujulile kwegazi nezinye izinto.
Uma sekuziwa kokwesintu, cha kuyathalaliswa kulindwe amathonsi abanzi bese kuba sengathi abadala banolaka kanti qha nabo badinwa wukunganakwa, kwenziwe sengathi kabekho. Kuye kuthike uma inkinga isihlule izithandwa zethu zesilungu, kugijinywe kuthiwe makuyobhekwa nasesintwini, nakhona kuyiwa ngokuzihudula, ithemba lingekho.
Abantu ukugula kwesilungu baze bakuhlinzeke ngisho nangohlelo lwama- medical aid ngoba bayazi ukuthi impilo kayibekelwa nani futhi ingashintsha noma inini.
Okwesintu akucatshangwa noma sekushiwo ukuthi makulungiswe, kuqale kuyiwe le na le kufunwa isiqiniseko sokuthi kumele ngempela yini kwenziwe lokho okudingekayo.
Kangilwi nokwelapha kwesilungu, kodwa bengibeka nje ukuthi sengathi umdlandla esenza ngawo okwesilungu ungenciphe uma sekufanele senze okwethu okuthinta imvelaphi nesintu sethu nemvelo nje ngobubanzi bayo.
Uma siqikelela ukwenza okungokwethu ngendlela eyiyo, siyovuna lukhulu ngoba bayojabula abasengamele besinxusela njalo.
Makhosi Ndleleni uMaZulu wakwaZondo Insika (isigodlo),UThishanhloko waseMatatane Secondary School [email protected] Utholakala ku: 082 752 7342
KUTHIWA asingalindi amathonsi abanzi ukunaka izinto ezithinta abadala namathongo noma kuze konakale izinto kuyima sisukuma.